မွန်ပြည်နယ်အတွင်း သစ္စာစီမံချက်ဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြား လေးသောင်းကျော်ပြုလုပ်ပေး?? - Yangon Media Group
မော်လမြိုင်၊ မတ် ၂၃
မွန်ပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင် အားဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မွန်ပြည် နယ်အတွင်း သစ္စာစီမံချက်ဖြင့် စီမံချက်ကာလအတွင်း အသက် (၁ဝ) နှစ်ပြည့်နှင့် အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်သူစုစုပေါင်း ၄ဝဝ၂၆ ဦးကို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပြုလုပ် ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်ဦးစီး မှူး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်ချယ် က ပြောကြားခဲ့သည်။
” မွန်ပြည်နယ်မှာ သစ္စာစီမံ ချက်ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်ကနေ ၂ဝ၁၉ခုနှစ် မတ် ၁၅ ရက် နေ့အထိဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ အသက် (၁ဝ)နှစ်ပြည့်သူ ၁၁၅၇၈ ဦး၊ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်သူ ၂၈၄၄၈ဦး စုစုပေါင်း ၄ဝဝ၂၆ ဦးတို့ကို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ပြား ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီသစ္စာ စီမံချက်ဟာ အချိန်တိုအတွင်းမှာ အောင်မြင်စွာဆောင် ရွက်နိုင်တာက မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ လမ်းညွှန် မှု၊ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်တွေ ရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတော့ လူတွေကိုစုထားပြီးသားဖြစ်သွား တယ်။ ဌာနဝန်ထမ်းတွေက လုပ်ရုံ ပါပဲ။ သွားရလာရတာတွေလည်း အဆင်ပြေတယ် ”ဟု ညွှန်ကြားရေး မှူး ဦးတင်ချယ်က ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်အနေဖြင့် နိုင်ငံ သားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မလုပ်ရသေး သူ ၂၄၇၈၇ ဦးကျန်ရှိနေသေး ကြောင်း၊ ထိုသူများမှာ စီမံချက်လုပ် ငန်းများဆောင်ရွက်စဉ် ကျေးရွာ တွင်မရှိဘဲ တစ်ဖက်နိုင်ငံများသို့သွား ရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူအများစု ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသူများကိုလည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သစ္စာစီမံချက်ကာလအတွင်း အိမ်ထောင်စုစာရင်း ၅၁၉ဝ၈ စောင်၊ အိမ်ထောင်ခွဲစာရင်း ၂၅၄၆ စောင်၊ မွေးစာရင်းထည့်သွင်းပေး သည့် ကလေး၂၃၄ဝ၁ ဦး၊ သေဆုံးမှု ကြောင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းမှ ထုတ်ပယ်သူ ၁၂၅၄၄ ဦး၊ အိမ် ထောင်စုစာရင်းတွင် နိုင်ငံသားစိ စစ်ရေးကတ်ပြား နံပါတ်ဖြည့်သွင်း မှု ၅၄ဝဝဝ တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ မွန် ပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနရုံးမှ စာရင်းများအရ သိရသည်။ ၂ဝ၁၈ခုနှစ်အတွင်း မွန်ပြည် နယ်တွင် အသက်(၁ဝ)နှစ်ပြည့်သူ ၄၁၉၂၂ ဦး၊ အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့် သူ၂၇၂၉၆ဦး၊ စုစုပေါင်း ၆၉၂၁၈ ဦး တို့ကို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်ရုံး မှစာရင်းများအရသိရသည်။
ထိပ်တန်းအဆင့်သို့ ဂျာမနီပြန်ရောက်နိုင်မည်ဟု ဂျူလီယန်ဘရန့် ယုံကြည်၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမ?
ချင်းတွင်းမြစ် အတွင်း၌ ရေလမ်းနှင့် မလွတ်ကင်းသည့် တံစုန်းများ ရှင်းလင်း